“Messi waa halyeey, halka Cristiano Ronaldo uu u noolyahay sida uu ku noqon lahaa kan ugu fiican aduunka” – Gool FM
“Messi waa halyeey, halka Cristiano Ronaldo uu u noolyahay sida uu ku noqon lahaa kan ugu fiican aduunka”
(Yurub) 20 Nof 2018. Laacibkii hore kooxda Barcelona Thiago Motta ayaa wuxuu ka hadlay xidigaha Cristiano Ronaldo, Lionel Messi iyo Neymar Jr, kadib wareysi uu ku bixiyay wargeyska “La Gazzetta dello Sport” ee dalka Talyaaniga.
Thiago Motta ayaa wuxuu ugu horeyn ka hadlay xidiga kooxda Juventus ee Cristiano Ronaldo, kaasoo suuqii xagaaga ee lasoo dhaafay kasoo dhaqaaqay Real Madrid.
“Cristiano Ronaldo waa ciyaaryahan cajiib ah, marka loo fiiriyo waxa uu sameenayo, waa ciyaaryahan gaar ah qaabka uu u noolyahay si uu u noqdo kan ugu fiican caalamka”.
Intaas kadib Thiago Motta ayaa wuxuu ka hadlay saaxiibkiis horey ee kooxda Barcelona wuxuuna yiri: “Lionel Messi wuxuu leeyahay hibo macquul ah, wuxuu awooday inuu rumeeyo riyadiisa, si uu u noqdo calaamad, Wuxuu inta badan ku tiirsanaa si kali ah, balse hadda wuxuu ku tiirsan yahay asxaabtiisa si ay isbeddel u sameeyaan”.
Motta ayaa hadalkiisa kusoo kusoo xiray ka hadalka Neymar Jr: “Wuxuu leeyahay tayo heer sare ah, wuxuu awoodaa inuu ka ilaashado kubada kuwa kasoo hor jeeda, qaab ciyaareedkiisa iyo awoodiisa jireed waa mid aad u xoogan”.
Alex Sandro oo albaabka u furay rabitaanka kooxda Chelsea
SAWIRRO: Labada Xiddig ee ugu Qaalisan kubbada Cagta oo hal habeen wada Dhaawacmay iyo Taageerayaasha Liverpool oo Faraxsan